Online Exhibition :: Focus Country | MOKKOJI KOREA
No.(57/60), Lower Mingalardon Road, Danyingone, Insein Township, Yangon
ထိုင်းနိုင်ငံ Samsung Electronics မှ မြန်မာ ရုံးခွဲအနေနဲ့ Samsung electronics ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း
#907, 9th Floor, Sakura Tower, 339 Bogyoke Aung San Road, Kyauktada T/S, Yangon
LG အိမ်သုံးပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း
Bldg 12, 3F, MICT Park, Hlaing T/S, Yangon
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ရုံကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Junction နှင့် ကိုရီးယား CJ ရဲ့ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ CGV တို့ ပူးပေါင်းပြီး JCGV ကော်ပိုရေးရှင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ၇၂နှစ်သက်တမ်းရှိ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု Songwol Towel
စံနူန်းပြည့် ချည်သာ ဝါးချည် စစ်စ်တွေနဲ့ ယက်လုပ်ထားပြီး ရေစုပ်ယူမူအား ကောင်းတဲ့ Songwol Towelnတာဝါ အရောင် ကျွတ်ခြင် အမွှေးများ ကပ်ကျန်ခြင်း လုံးဝမရှိသော Songwol Towel
Color မျို ရွှေးချယ်စရာများတဲ့ အမျိုးအစား မျိုးစုံရှိတဲ့ Songwol Towel
ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် JBJ Entertainment Co., Ltd မှ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် တင်သွင်း ဖြန့်ချိ ရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။
K201, Second Floor, Myanmar Plaza.
မြန်မာ-ကိုရီးယား Entertainment ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ Audition TV အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူ Rating ၆၈%ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်း Boy Group ALFA ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Debut ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Girl Group LUCI (ယာယီအမည်) ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ Asia Model Festival Organizing Committee (AMFOC) ၏ ပါတနာတစ် ဦး အနေဖြင့် နှစ်စဉ် Face of Myanmar Model ပြိုင်ပွဲကို စီစဉ် ကျင်းပလျှက်ရှိပြီး Law of the Jungle ( Myanmar episode ) နှင့် My Music Teacher Mingalaba စသည့်ကိုရီးယားရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူများနှင့်လည်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
No.(1A), 10 Street,3Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ LG ထုတ်ကုန် နှင့် ကိုရီးယားအလှကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချီခြင်း
H9/10, Maykha Housing Complex, Lay Daung Kan RD, Thinkangyun Township, Yangon
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး Coway ရေသန့်စက်သည် ၂၀၁၆ ခုနစ်မှ စတင် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ကြာ အကောင်းဆုံးနည်းပညာကို အခြေခံထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ‌ရေနှင့်ပတ်သက်‌သော သုတေသနနှင့် နှစ်နှစ်တာ ကာလ အတွင်း လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံး ရလာဒ် အနေဖြင့် အကောင်းဆုံး filter system ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနစ်မှစ၍ ကိုရီးယားကဲ့သို့ စနစ်ကျသော service system အား ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူအများအပြား တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုကြသည့် စက်ရုံများတွင်လည်း တပ်ဆင်ထားရှိပြီး ပြီးပြည့်စုံသော system ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိထားပါသည်။ ကိုရီးယား၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ မလေးရှား စသည့် နိုင်ငံတကာတွင်လည်း စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် Coway ရဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းပညာနှင့် ယုံကြည် စိတ်ချရသော service system မှာ သုံးစွဲသူကြားတွင် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံထားရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သုံးစွဲသူ စိတ်၀င်စားမှုကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း သုံးစွဲသူ အယောက် ၁၀၀၀ ဖြင့် ‌ကြီးမားသော အကောင်းဆုံး ရလာဒ် ရရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍လည်း ကောင်းမွန်သော marketing ကို ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။
insulated Wire လျှပ်စစ်စီး ဝါယာကြိုးများ Communication cable ဆက်သွယ်ရေး ကြေးနန်းကြိုးများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း
Lot B18-1, Thilawa SEZ, Thanlyin Township, Yangon
မြန်မာ ကိုရီးယား စားသောက်ဆိုင် Sorabol သည် ၂၀၁၅ခုနှစ်ကစပြီး ရန်ကုန် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ပင်မဆိုင်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုဆိုရင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၅ ဆိုင်အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အရသာ ထူးကဲတဲ့ ရိုးရာ အရသာကို မြန်မာနိုင်ငံအပြင် တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူမျိုးတွေပါ သိရှိနိုင်အောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
ဆိုင်ခွဲ ၅ ဆိုင်မှာ ဝန်ဆောင်မှု မျိုးစုံနှင့် မတူကွဲပြားသည့် အပြင်အဆင်များ ပြုလုပ် ဖန်တီးထားပါသည်။
အကောင်းဆုံးသော ကိုရီးယားစားဖိုမှူး၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စားသုံးသူများ စိတ်ချလက်ချ စားသုံးနိုင်ရန် အစဥ်အမြဲ ကြိုးစားလျှက် ရှိပါသည်။
No.15 Kan Bawza Street, Shwetaungkyar (1) Quarter, Bahan Township, Yangon
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုရီးယား ချွေးထုတ်ခန်း
Pin Lon Road, National complex, North Dagon
on/offline အလှကုန် အရောင်းဆိုင်များ , Star Secret seoul , star secret Korea အစရှိသည့် ကိုယ်ပိုင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချိခြင်း
1st Floor, Hledan Center, Kamayut Tsp, Yangon
No.3, Moe Kaung Road, Yankin Township
Pado Screen Golf
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကိုရီးယားလူမျိုးဖွင့်လှစ်ထားသော Screen Golf (ဖန်သားပြင် ဂေါက်ကွင်း)